Alisten Lumare: Mpisava Lalana Manokana Nandritra ny 50 Taona
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
TANTARANY Inspekteran’ny polisy izy taloha ary mpisava lalana manokana nandritra ny 50 taona mahery.
VOATENDRY ho mpisava lalana manokana tany Manokwari, any Papouasie Andrefana, aho tamin’ny 1964. Nisy fiangonana kely tany ary nenjehin’ny mpitondra fivavahana mafy izy io. Tsy ela taorian’ny nahatongavako, dia niditra an-keriny tao an-tranoko ny mpitondra fivavahana protestanta iray.
Nivazavaza izy hoe: “Horavako ity trano ity ary hataoko tsisy Vavolombelon’i Jehovah intsony eto Manokwari.”
Tsy nampihontsina ahy izany satria efa zatra an’izany aho tamin’izaho polisy. Novaliako moramora izy dia nisaraka tsy nisy raorao izahay.—1 Pet. 3:15.
Valo monja ny mpitory tany Manokwari tamin’izany, nefa misy fiangonana fito any izao, 50 taona eo ho eo atỳ aoriana. Nisy 1 200 mahery no nanatrika ny fivoriamben’ny vondrom-paritra teo an-toerana, tamin’ny 2014. Tena faly aho rehefa mahita ny fomba nitahian’i Jehovah an’io faritra mitokana io.
Mahavita fitoriana 30 na 50 ora isam-bolana ny Vavolombelona sasany, ary misy aza mihoatra an’izany. Nahoana izy ireo no mazoto be toy izany?
Fantaro hoe nasain’i Jesosy nanao inona ny mpianany voalohany.